Miampanga Ireo Refôrmista Hiditra Am-ponja 10 Ka Hatramin’ny 11 Taona Ny Fitsarana Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2013 1:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Português, 日本語, English
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny : Reformista miatrika fitsarana any Arabia Saodita ity lahatsoratra ity
Vao marainan'ny 9 Martsa, namoaka ny valim-pitsarany ny Lapam-pitsarana misahana ny Heloka Bevava any Riyadh mikasika ireo reformista roa sady mafana fo amin'ny zon'olombelona Mohammad al-Qahtani sy Abdullah al-Hamid, taorian'ny fiampangana azy ireo ho “tsy nankatò ny mpitondra sy ny mpandimby azy” sy ny “fikasana hanakantsakana ny fivoaran'ny firenena”. Voampanga hiditra an-tranomaizina mandritra ny 10 taona i al-Qahtani ary 5 taona kosa i al-Hamid, miampy ireo saziny teo aloha (7 taona, navoaka herintaona taty aoriana noho ny famindram-pon'ny mpanjaka). Nanambara ny mpitsara fa “mitera-doza” ny famelàna azy ireo ivelan'ny fonja ary nibaiko ny fisamborana azy ireo avy hatrany. Ho fanampin'izay, nibaiko ny fandravana ny Fikambanan'ny Sivily Saodiana sy ireo miaro ny Zo Politika (ACPRA), sy ny figiazana avy hatrany ny fananany rehetra. Manan-jo hanohitra izany fanapahan-kevitra izany ireo voampanga ao anatin'ny 30 andro.
Nanomboka ny Jona 2012 ny fitsarana an'i al-Qahtani sy al-Hamid, izay natao nisaraka sy niafina. Taorian'iny fakàna am-bavany voalohany, nampiray ireo raharaha roa ireo ny mpitsara, fa kosa nanindry mafy fa tokony ho tsy azo atrehana ny resaka. Nandà izany ireo mafana fo roa ireo, nilaza fa fitsarana politika izany, ary ny fanaovana azy imasom-bahoaka irery ihany no antoka ho amin'ny rariny ho azy ireo. Tamin'ny fakana am-bavany fahadimy, nanapa-kevitra ny hilefitra ihany ny mpitsara, ka namadika izany ho fitsarana azon'ny vahoaka atrehana.
al-Qahtani (havanana) asy al-Hamid (fahatelo avy any ankavanana) talohan'ilay fitsarana. avy amin'i @DrRAYQ
Ny alina lasa teo, nioraka bitsika i al-Hamid [ar]:
@Abubelal_1951: Ho an'ireo rahalahiko izay kely finoana sy mahonena momba ilay fitsarana ACPRA: raha voatana an-tranomaizina izahay, fandresena goavana ho an'ny tetikasa izany ary mirehitra any amin'ireo fonja ny labozia.
Natrehana mpanohana maherin'ny 130 ny fotoam-pitsaràna androany, ho fanampin'ireo solotena avy amin'ny Al Jazeera, Sky News ary gazety nasionaly vitsivitsy. Mpikambana maherin'ny 30 avy amin'ny hery manokana no nameno ny lapam-pitsarana. Tao ivelany, tonga nialoha i al-Hamid hanangona ny sonian'ireo mpanatrika mangataka ny fialan'ny Minisitry ny Atitany Mohammad bin Nayef, sy ny famongorana ireo sazy avy amin'ny fitsarana ankinafinafina rehetra.
Nitoraka bitsika ny mafana fo Waleed Abualkhair :
@abualkhair: Nalain'izy ireo ny peninay sy ny findainay. Araka io lisitra io, 105 ireo mpanatrika amin'izao fotoana izao, mbola misy 30 tsy nanoratra anarana.
Tsy nahita fomba hidirana ireo mafana fo sasany. Nitoraka bitsika i Hood al-Aqeel:
@h_141: Ato anatin'ny lapam-pitsarana aho. Tsy avelan-dry zareo aho fa laziny hoe tsy misy toerana malalaka!
Anatin'ilay valim-pitsarana, nilaza ny mpitsara fa mifandray akaiky ny al-Qaida sy ny ACPRA. Ary koa, nanambara izy fa ara-drariny ny fepetra fanerena ho fampiharana ny sazy. Nitatitra i Mohammad al-Abdualkreem:
@alabdulkarim0: Namehy ny mpitsara fa tsy mitombina ilay teôrian'ny fifanekena sosialy ary mifanipaka amin'ny finoana Silamo, ary zavatra fototra eo amin'ny fampiharana ny Silamo ny fepetra fanerena ho fampiharana ny sazy, ny fandovàna fanjakana sy ny fanendrena.
Tamin'ny May 2011, nandray anjara tanatinà hetsi-panentanana Women2Drive iray i al-Qahtani, mangataka ny fanesorana ny fanakanana ny vehivavy tsy hitondra fiara. Raha ny hita, nitarika ny fanononan'ny mpitsara zavatra mikasika izany tao anatin'ny valim-pitsarana navoakany ilay izy. Nitoraka bitsika ny mpampiasa Twitter Jihad Abdullah:
@CheJihad: Nampangain'ny mpitsara i al-Qahtani ho nandeha fiara niaraka taminà vahiny raha ny vadiny no teo amin'ny familiana. Raha ny marina, malalaka izy sy ny vadiny, tsy misy idiranao ny amin'izany!
Nahamarika ireo mpampiasa Twitter fa feno an'ireo hafatra nomanina handeha ho azy miverimberina izay mamely ireo mafana fo roa ary miampanga azy ireo ho mpamadika, ny tenifototr'ilay fitsarana. Nitoraka bitsika i Mishari AlGhamdi:
@mishari11: Kaonty sandoka am-polony no manoratra ilay fanambarana iray mitovy. Mampalahelo. Na ny fisolelahana sy ny tsy rariny aza dia alentiky ny kolikoly.